Ciidamo boolis dheeraad ah oo lagu daadinayo magaalada London – The Voice of Northeastern Kenya
Ciidamo boolis dheeraad ah oo lagu daadinayo magaalada London
Laamaha ammaanka ee wadanka Britain ayaa shaaca ka qaaday in la kordhin doono tirade ciidamada booliska ee ka howl gala magaalada caasimadda ah ee London, si looga hor tago weeraro argagixiso oo ay suurta gal tahay in laga fuliyo gudaha London.
Taliska booliska London ayaa maanta sheegay in ay wadaan qorshe ciidamada amaanka oo dheeraad ah oo ay tiradooda gaareyso 600 oo askari looga howl galinayo magaaladaasi.
Booliska lagu daadinayo magaalada London oo ah kuwo si buuxda u hubeysan ayaa si joogto ah roondooyin uga sameyn doona wadooyinka magaaladaasi.
Masuuliyiinta ayaa sheegay in ay go’aankaas qaateen kadib markii ay mudooyinkii dambe isasoo tareen weerarada argagaixiso ee ka dhaca dalalka qaaradda Europe, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwii ka dhacay waddanka France.
Markii ugu dambeysay ee uu weerar argagixiso ka dhaco magaalada London ee xarunta u ah waddanka Britain waxa ay ahayd 7-di bishii July ee sanadkii 2005-ti, waxaana xiligaas 4 nin oo hubeysan ay weerar la beegsadeen 3 goobood oo ka mid ah boosteejoojinka tareenada iyo basaska laga raaco ee dhulka hoostiisa.
Ugu yaraan 52 ruux ayaa lagu dilay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen weeraradaas oo ay masuuliyadooda sheegatay shabakadda Al Qaacida.
← Kenya iyo Cuba oo iska kaashanaya howlaha caafimaadka
Manchester City oo la soo wareegtay Gabriel Jesus →
1 thought on “Ciidamo boolis dheeraad ah oo lagu daadinayo magaalada London”
turkiga wa dowlad magac iyo miizan ku leh caalamka waxaase suuragal ah gowl galada ay ku xirxirayso dadkan faraha badan inay ooga sii daraan xaaladaha kaasoo sababi kara kacdon shacab by ahmed sh hassan o jooga dagaxly